Vivo X27 na Vivo X27 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Egosiputala Vivo X27 na X27 Pro
Izu ndị a enwere ụfọdụ mkpọpu banyere Vivo X27 Pro, ihe nlereanya ohuru maka etiti di iche-iche nke ika China. N'ime ha ka ị nwere ike ịhụ nke ahụ ngwaọrụ a ga - eji igwefoto a na - esepụ azụ, ihe anyị na-ahụ ọtụtụ ọnwa ndị a. N’ikpeazụ, ekwentila ya n’iru. Na mgbakwunye, ọ bịaghị naanị ya, n'ihi na ọ na-abịa na Vivo X27.
Modelsdị ọhụrụ abụọ maka etiti site na akara ndị China. Ihe bu eziokwu bu na Vivo X27 a na Vivo X27 Pro ha nwere ọtụtụ akụkụ na-emekọ ọnụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nkọwa ya dị iche, dịka ị ga-atụ anya ya. Mana ha gosipụtara dị ka nhọrọ abụọ na-atọ ụtọ n'etiti etiti.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nzọ doro anya nke akara ndị China ka ịchekwa ezigbo ọnụnọ na nke a. Ndụ dị ugbu a nke abụọ kachasị ere ahịa na China. Ọzọkwa, ha nwere olile anya na ha nwere ike ịga n'ihu na ahịa ọhụrụ. Dị dị ka Vivo X27 Pro na Vivo X27 ndị a bụ ezigbo enyemaka maka nke a.
1 Nkọwa Vivo X27 na Vivo X27 Pro
Nkọwa Vivo X27 na Vivo X27 Pro
Anyị na-ahapụ gị na tebụl nke ị nwere ike ịhụ nkọwa nke ụdị abụọ ahụ. Dịka anyị kwurula, ha nwere akụkụ ole na ole dịka ibe ha. Yabụ na nke a bụ otu ị ga - esi hụ akụkụ niile dị iche na esemokwu anyị na - ahụ na ụdị abụọ dị n'etiti akara nke akara a:
IKIRU 6,39-anụ ọhịa Super AMOLED na mkpebi FullHD + (2.340 × 1.080) na 19,5: 9 ruru 6,7-inch Super AMOLED na mkpebi FullHD + (2.340 × 1.080) na 20,5: 9 ruru
Nhazi Ihe nhazi Snapdragon 675 / Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 710
Meme ncheta 128 GB / 256 GB 256 GB
Ndị isi N'azụ: 48MP + 13MP + 5MP
Ihu: 16 MP
N'azụ: 48MP + 13MP + 5MP
Ihu: 32 MP
Software A gam akporo 9 achịcha na Funtouch OS A gam akporo 9 achịcha na Funtouch OS
UMUAKA 4.000 mAh na ngwa ngwa 4.000 mAh na ngwa ngwa
NDỊ ọzọ Ihe ntanetị ihe ntanetị na ihuenyo Ihe ntanetị akara ihuenyo, NFC,
Njikọ Wifi 802.11 a / c, Bluetooth, GPS, Wifi 802.11 a / c, Bluetooth, GPS ,, jaak 3,5 mm
N'ihe banyere Vivo X27, ika ijuanya site launching abụọ na nsụgharị nke ya. Nkọwapụta dị otu otu na ikpe abụọ, mana anyị na-ahụ nsụgharị abụọ dabere na processor eji. N'ime otu n'ime ha anyị nwere Snapdragon 675 processor, otu n'ime ihe kachasị nso n'etiti etiti na gam akporo. Thedị nke abụọ na-eji Snapdragon 710, ihe nhazi ahụ kachasị mma n'ime oke etiti.
N'aka nke ọzọ anyị nwere Vivo X27 Pro, nke na-eji Snapdragon 710. Na nke a, anyị nwere otu ụdị ekwentị, yana otu njikọta RAM na nchekwa dị n'ime ya. Njirimara dị na ngwaọrụ abụọ ahụ nwere ọtụtụ akụkụ, dịka ị pụrụ ịhụ.
Ha na-eji otu kamera azụ n’azụ okwu abụọ ahụ, otu ike batrị. A na-echekwa RAM 8 GB na ụdị abụọ ahụ, nke doro anya na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ dị oke mma, na-eche na ha bụ ụdị dị n'etiti etiti. Esemokwu ndị bụ isi bụ nha, ebe ọ bụ na Vivo X27 Pro dị ntakịrị karịa ụdị nke ọzọ, nwere ihuenyo 6,7 nke anụ ọhịa, nke doro anya na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị ukwuu na etiti a na gam akporo.
Maka ugbu a, ọ bụ naanị mmalite nke ekwentị abụọ ka ekwenyela na China. Anyị amaghị ma a ga-ewepụta ha na mpụga mba ahụ. Ọ bụ ihe anyị na-atụ anya ịmata n'oge na-adịghị anya, mana ọ nweghị oge enyerela data gbasara nke a. Luckily, anyị nwere ahịa nke ọ bụla n'ime nsụgharị nke ngwaọrụ abụọ a:
Versiondị nke Vivo X27 na Snapdragon 675 na-abịa na ọnụahịa nke 3.198 yuan (euro 420 na mgbanwe ahụ)
Vivo X27 na Snapdragon 710 ga-efu 3.598 yuan (ihe dị ka euro 470 ịgbanwe)
Vivo X27 Pro malitere na ego nke 3.998 yuan (525 euro iji gbanwee)
Banyere agba, anya dị ka-acha anụnụ anụnụ na pink bụ ndị mbụ enen na agba nke ụdị ndị a. Ọ bụ ezie na ụfọdụ mgbasa ozi na-ekwu na e nwere a green green ha. Mana ugbu a, a ga-enwe agba abụọ nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Egosiputala Vivo X27 na X27 Pro
Instagram Checkout rutere netwọkụ mmekọrịta iji kwado usoro ịzụta na-ahapụghị ngwa ahụ
Honor 10i: Ugwu ohuru ohuru di ugbu a